MacBook Pro M1 Max dia voamarina fa tsara indrindra ho an'ny mpaka sary | avy amin'ny mac aho
Rehefa natomboka teny an-tsena ny Mac vaovao misy M1 dia lehibe ny hery nomeny. Raha ny marina, ireo MacBook Pros vaovao ireo dia nanome vokatra tsara kokoa noho ny Mac Pros ary mazava ho azy fa tsara kokoa noho ny Intel tsara indrindra. Tamin'izany fotoana izany dia voalaza fa ny chips M1 vaovao no tsara indrindra azon'ny solosaina iray. Orinasa maro no nanomboka nampiasa ireo Macs ireo ary nitombo ny vokatra. Fotoana izao hanamafisana ny iray amin'ireo sehatra tena mila herinaratra amin'ny Mac. Ny mpaka sary.
Rehefa milaza ianao fa ny Mac vaovao miaraka amin'ny M1 no tsara indrindra amin'ny fotoam-pivoriana sary, tsy misy tsara kokoa noho ny manohana azy ireo amin'ny porofo. Raha mpankafy sary ianao dia ho fantatrao fa zavatra tsy mahazatra ny fakan-tsary mialoha ireo teny ireo. Io angamba no fakan-tsary tsara indrindra azonao jerena amin'ny fivarotana. Ny tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy satria tsy ho an'ny mpaka sary rehetra, lavitra azy. Raha manao sary saripika ara-barotra na studio ianao na tontolo mangina aza, Ny dingana voalohany XFIQ4 Izy io no tsara indrindra amin'ny tsara indrindra sy mitaky indrindra.
Ny mpaka sary zokiolona CNET Andrew Hoyle dia nitatitra momba ny traikefany niasa tamin'ny fakan-tsary fakan-tsarimihetsika Phase One mipetaka amin'ny MacBook Pro mandeha M1 Max miaraka amin'ny fahatsiarovana mitambatra 64GB. Ataovy ao an-tsaina fa fakan-tsary afaka maka sary 150 MPx. Ho an'ny fitsapana, ny zavatra nataony mba hanitsiana bebe kokoa ny fitsapana sy hahatonga azy ho sarotra kokoa, dia ny naka sary maromaro ary avy eo nampitambatra azy rehetra ho iray. Niteraka 11 GB farany izany. Tsy mijanona eto. Nampitahainy tamin’ny Mac M1 sy tamin’ny Intel i9 izany. Miteny ho azy ny valiny:
1-mirefy MacBook Pro M16 Max miaraka amin'ny fitadidiana 64GB (2021) 4 minitra sy 36 segondra
MacBook Pro M1 13-inch (2020) 6 minitra sy 39 segondra
9-mirefy MacBook Pro Intel Core i16 (2019). Fotoan'ny 16 minitra sy 36 segondra
Tsy misy azo lazaina intsony…
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook Pro » Ny MacBook Pro M1 Max dia voamarina fa tsara indrindra ho an'ny mpaka sary